Bit By Bit - Running nemaresiphi - 4.5.1.3 Yakha umkhiqizo wakho siqu
UKWAKHA umkhiqizo wakho siqu ephezulu, high-umvuzo. Kodwa, uma usebenza, ungazuza a omuhle impendulo iluphu eyenza ucwaningo ehlukile.
Ukuthatha ndlela wokwakha sokuhlolwa kwakho siqu isinyathelo esisodwa okunye, abanye abacwaningi empeleni bayoyakha imikhiqizo yabo siqu. Lezi imikhiqizo ukuheha ababambiqhaza, bese bakhonze njengamaphayona ezisekelweni for ucwaningo kanye nezinye izinhlobo ucwaningo. Ngokwesibonelo, iqembu labacwaningi e-University of Minnesota wadala MovieLens , esihlinzeka khulula, non-commercial ngezifiso izincomo movie. MovieLens aye wasebenza njalo kusukela ngo-1997, futhi ngalesi sikhathi 250,000 abasebenzisi ababhalisiwe uye wanikeza izilinganiso ezingaphezu kwezigidi ezingu-20 mayelana amabhayisikobho angaphezu kuka 30,000 (Harper and Konstan 2015) . MovieLens uye wasebenzisa umphakathi esebenzayo abasebenzisi ucwaningo emangalisayo esukela testing eyeza nezazi zezinkanyezi ezikhuluma social science mayelana iminikelo izimpahla zomphakathi (Beenen et al. 2004; Cosley et al. 2005; Chen et al. 2010; Ren et al. 2012) Ekubhekaneni nezinselele algorithmic e isincomo izinhlelo (Rashid et al. 2002; Drenner et al. 2006; Harper, Sen, and Frankowski 2007; Ekstrand et al. 2015) ; sokubuyekeza egcwele ukubona Harper and Konstan (2015) . Abaningi balaba nemaresiphi kwakungeke kwenzeke ngaphandle abacwaningi kokuba okulawula umkhiqizo wangempela sabasebenzi.
Ngeshwa, ekwakheni umkhiqizo wakho siqu Liyindawo kunzima, futhi kufanele ucabange it like kwakheka inkampani ekuqaleni-up: ephezulu, high-umvuzo. Uma kuwukuthi yimpumelelo, le ndlela inokuningi control ebangelwa ekwakheni ukuhlolwa kwakho siqu ngokoqobo futhi abahlanganyeli ukuthi zivela abasebenza izinhlelo ezikhona. Ngaphezu kwalokho, le ndlela kuyinto engase ibe ukwazi ukwakha emihle impendulo iluphu lapho ucwaningo olwengeziwe kuholela umkhiqizo kangcono okuholela abasebenzisi abaningi okuholela abacwaningi more njalonjalo (Figure 4.15). Ngamanye amazwi, kanye omuhle impendulo loop ukhahlela in, ucwaningo kufanele uthole lula. Naphezu kweqiniso sibheke abangahle bona ngekwabo kubalulekile kulendlela, Angikwazi cosha phi nye izibonelo empumelelo, okuyinto ebonisa kunzima kanjani akhiphe ngempumelelo. Kodwa, ithemba lami wukuthi lelisu iyoba kunengqondo ngaphezu njengoba ubuchwepheshe ngcono. Lezi ubunzima ngokudala umkhiqizo wakho siqu kusho ukuthi abacwaningi abafuna ukulawula umkhiqizo kungenzeka kakhulu ukubambisana inkampani, isihloko ngizobuya ayesezobashumayeza.
Umfanekiso 4.15: Uma ungakwazi ngempumelelo ukwakha umkhiqizo wakho siqu, ungazuza a omuhle impendulo iluphu: ucwaningo kuholela umkhiqizo kangcono okuholela abasebenzisi more okuholela ucwaningo nakakhulu. Lemibiko emihle impendulo izihibe ngendlela emangalisayo kunzima ukwakha, kodwa ungakwazi sikwazi ucwaningo ukuthi bekungeke kwenzeke ngenye indlela. MovieLens iyisibonelo wocwaningo ukuthi unakho siphumelele ekwakheni omuhle impendulo loop (Harper and Konstan 2015) .